घरमा यस्ता जनावरहरु देखिएमा थाहा पाउनुहोस घरमा सकंट लाग्दैछ : यस्ता कुरामा बिशेष ध्यान दिनुहोस - Eall Nepal
घरमा यस्ता जनावरहरु देखिएमा थाहा पाउनुहोस घरमा सकंट लाग्दैछ : यस्ता कुरामा बिशेष ध्यान दिनुहोस
एजेन्सी। हिन्दू धर्ममा मानिसहरुले बिरालोसँग जोडिएका कयौं शुभ र अशुभ धारणा बनाएका छन्। नारद पुराणका अनुसार घरमा बिरालो बारम्बार आउनु अशुभ मानिन्छ। नारद पुरणामा तपाइँको घरमा बिरालो बारम्बार आउँछ भने परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। र घरमा तनावको स्थिति आउन सक्छ। बिरालो आउनु नकारात्मक उर्जाको प्रतीक मानिन्छ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार दूध चन्द्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। र घरमा दूधको हानि हुनु चन्द्रमा माथि राहुको दुष्प्रभाव भएको मानिन्छ। यदि घरमा राखेको दूध बिरालोले खायो भने त्यसलाई अशुभ मानिन्छ। यसबाट आर्थिक नोक्सानको सभावना रहन्छ। आजकल बिरालो पनि घरपालुवा जनवारमा शामेल भएको छ। तर बिरालो पाल्नु पनि अशुभको प्रतीक हो। आउनुुस् बिरोलोसँग जोडिएका केही अशुभका बारेमा जानकारी लिऔं।
बिरालो आपसमा झगडा गरे भने धनहानि र गृ कलह हुन सक्छ। यदि तपाइँको घरमा बिरालो झगडा गरिरहेका छन् भने तपाइँको घरमा कहल हुन सक्छ।
बिरालोले बाटो काट्नु, बिरालो रुनु र आपसमा झगडा गर्नु पनि अशुभ मानिन्छ। सामान्यता बिरालोको बाटो काटेको अशुभ मानिन्छ। यदि बिरालोले यदि दाहिनेतिरबाट बाटो काटेको छ भने बायाँ तर्फ जानु भयो भने बिरालोले बाटो काटेको अशुभ मानिदैन।
तपाइँ कुनै शुभकार्यमा जाँदै हुनुहुन्छ र बिरोलो आफ्नो मुखमा मासुको टुक्डा लिएर उभिएको देखियो भने तपाइँको काम सफल हुन्छ। यदि सुतिरहेको व्यक्तिको टाउको बिरालोको चाट्यो भने यस्ता व्यक्ति सरकारी मामिलमा फस्न सक्छ। दिपावलीको रातमा घरमा बिरालो आउनु शुभ मानिन्छ।
प्रायगरी तन्नेरी युवाहरु अर्काकी श्रीमतीलाई किन ताकी ताकी मायाप्रेमको जालमा पार्छन ? यस्ता छन कारण
व्यवसायबाट नोक्सान मात्र हुदैछ भने व्यवसाय गर्ने ठाउँबाट यी ६ चिज तुरुन्त हटाइहाल्नुहोस
Runningablog isadefinite thing and realistically, everybody can blog. Blogging and site-building is shown to secure you…